ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » Just Perfect ခံစားရဘယ်တစ်ဦးဂရိတ် Kiss များအတွက်ထိပ်တန်းအကြောင်းသိကောင်းစရာများ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇန်နဝါရီ. 17 2021 |2မိဖတ်ပြီးသား
ဟုသုတေသနလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းကတွေ့ရှိခဲ့သည် 66% အမျိုးသမီးများနှင့် 59% ယောက်ျား၏သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်နမ်းမှာအကောင်းမဟုတ်ခဲ့လို့သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအဆုံးသတ်. ဒီတသူ / သူမ၏ဆက်ဆံရေးရေရှည်တည်တံ့စေခြင်းငှါနမ်းရှုံ့အနုပညာသင်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်လောက်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးပြသ. အောက်ဘက်မှာတော့အလွန်ကြီးစွာသောနမ်းတချို့အသုံးဝင်သောအကြံပြုချက်များမှာ.
– အများပြည်သူအတွက်ကိုရှောင်ကြဉ်နမ်းဖို့ကြိုးစားပါ. ဟုတ်ကဲ့, သင်ကျိန်းသေလူသိရှင်ကြားလျင်မြန်စွာ Peck အဘို့အသွားနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ပွင့်လင်းထဲကလည်းစိတ်အားထက်သန်ဖြစ်ခြင်းမှရှောင်ရှားရန်အမြဲတစေပညာရှိင်. စိတ်အားထက်သန်အနမ်းပွင်သင့်ရဲ့ private အချိန်လေးဆင်ယင်ခြယ်သသင့်ပြီးသင်တံခါးပိတ်သူတို့ကိုအတွက်လုပ်ကြလျှင်သို့မဟုတ်သင်ကြည့်ဖို့ဘယ်သူမှရှိမယ့်အခါ, ဒါကြောင့်ပိုကောင်းင်. ပုဂ္ဂလိကအတွက်နမ်းနှစ်မျိုးစလုံးမိတ်ဖက်သူတို့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်အကောင်းဆုံးမှာဖြစ်ခွင့်ပြု, အလွန်ကြီးစွာသောနမ်း၏ပင်မပစ္စည်းအရာဖြစ်၏.
– ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးကိုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်လူတွေကမကြာခဏခက်ခဲကြောင်းနမ်းရှုံ့ကြသောအခါသူတို့သည်မိမိတို့အံသွားနှင့်အတူပြုရမည်ကိုအတိအကျဘာကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ရှာတွေ့. နမ်းရှုံ့တဲ့အခါသင်သင့်အံသွားခဲ manage မနိုင်လျှင်, သင်ကျိန်းသေတဲ့မကောင်းတဲ့ kisser များမှာ. အဆိုပါပြဿနာကတော့ရိုးရိုးလေးပါဖြစ်ဟန်, ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ဒါဟာကျော်လွှားရန်လွန်စွာခက်ခဲသည်.
– သင့်ရဲ့အံသွားသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ထိခိုက်အဆုံးသတ်သို့မဟုတ်နမ်းရှုံ့ကြသောအခါလုံလောက်အသည်းအသန်ဖြစ်ခြင်းမှရပ်တန့်ကြဘူးကြောင်းသေချာစေရန်, သင့်ရဲ့အံသွားအကြားသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်၏နှုတ်ခမ်းကိုဖျစ်ညှစ်တဲ​​့အခါသင်တတ်နိုင်သမျှနူးညံ့သိမ်မွေ့ဖြစ်ရမည်. ထိုအခါ, နှေးကွေးစွာသူတို့ကိုဆွဲထုတ် (သင့်ရဲ့ partner ၏နှုတ်ခမ်း) နောက်ပြန်နှင့်သူတို့ကသင့်အံအားဖြင့်ချောချောမွေ့မွေ့လျှောခွင့်ပြု. အဆိုပါလုပ်ရပ်လွန်းမခက်ခဲသည်, အဘယ်အရာကိုခက်ပါတယ်သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်သင်သည်သင်၏သွားများရဲ့အနေအထားကိုခန့်အသိစိတ်ဖြစ်ကြောင်းနာ​​းလည်သဘောပေါက်ရန်ခွင့်ပြုခြင်းမရှိဘဲတပ်လှန့်နေရခြင်းသည်.
– နမ်းသောအခါအလွန် kissers အမြဲတမ်းသူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အတူမျက်လုံးချင်းစေရန်ပိုနှစ်သက်. ဟုတ်ကဲ့, kissers ယခုအချိန်တွင်ခံစားရရန်သူတို့၏မျက်စိပိတ်ဖို့အချိန်ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်တကပြီးပြည့်စုံသောနမ်းင်သာလျှင်ဘာ. နမ်းခြင်းပြီးပြည့်စုံသောစေရန်, သင်ကဲ့သို့မကြာမီသင်၏နှုတ်ခမ်းကိုသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်၏ကြောင်းနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိလာအဖြစ်သင်၏မျက်စိပိတ်မပေးသင့်. မျက်လုံးချင်း Make; သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ရဲ့သင်၏မျက်စိကနေစိတ်အားထက်သန်စီးဆင်းမှုကုန်အံ့; တစ်ခုပြီးပြည့်စုံသောနမ်းခြင်းအဘို့အစာရွက်င်.
– ကြီးစွာသော kisser သူ / သူမ၏မိတ်ဖက်များအတွက်ပါတ်သတ်ဆက်နွယ်ခံရဖို့နမ်းရှုံ့အတွေ့အကြုံခွင့်ပြုဘယ်တော့မှမ. ဒါကြောင့်, သင်သည်ကောင်းသော kisser ဖြစ်လိုလျှင်သင်သည်နမ်း၏လုပ်ရပ်သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်များအတွက်ပါတ်သတ်ဆက်နွယ်လို့ဖြစ်လာမကြောင်းသေချာစေရန်နည်းလမ်းရှာရမယ်. ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းနမ်းအောင်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာလုပ်ရပ်သို့သင့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပါဝင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. သင်၏လက်ကိုအသုံးပြုပြီးသင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းများကိုအများဆုံး erogenous ခြော့နှင့်ညင်သာစွာသူ / သူမခေါင်းကို massage, မျက်နှာနှင့်လည်ပင်း. သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ဧကန်အမှန်ပိုပြီးယခုအချိန်တွင်စတင်ခံစားကြမည်.
နမ်းခြင်းပါစေခြင်းငှါ, အလွန်ကြီးစွာသောနမ်း, သင်တို့အပေါ်မှာသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်လှန်သောအကျင့်တို့ကိုကျင့်ရမယ်. အဆိုပါအလုပ်အလျှင်းမခက်ခဲသည်; ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ညာဖက်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်စိတ်အားထက်သန်တွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်